Porno wuxuu noqon karaa mabnuuc dhaqameed | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka Maandooriyaha Dabeecadda
Cilmi-baarisyo dhowaan muujisay dabeecadaha oo kaliya maahan walxaha wuxuu noqon karaa mid xariif ah. Waxay keeni karaan isbeddello muuqaal oo isku mid ah nidaamka abaalmarinta maskaxda ee cocaine ama khamriga ama waxyaalaha nicotine-ka ah ee soo saaraya. (Hoos eeg). Dabeecadahaas waxaa ka mid ah khamaarista, ciyaaraha internetka, iyo warbaahinta bulshada sida Facebook oo laga yaabo inay la kulmaan barnaamijyo sida Tinder ama Grindr.
Halkan waa a warqad by cilmi-baarayaasha neerfaha ee adduunka oo sharraxaya sababta sawir-gacmeedka qaawan ee internetka loogu tixgelinayo inuu yahay cillad qabatin leh. Waxaa wada-qorey cilmi-baarayaal badan oo ku saabsan cilladaha galmada ee dhibaatada leh. Waxay su'aal ka taagan tahay in baaritaanka cusub ee CSBD uu ka tirsan yahay qaybta "Iskuduwaha Xakamaynta Dhibaatada", halkaasoo ay hadda deggan tahay. Qorayaashu waxay soo jeedinayaan in ugu qancin, taageerada jirta ay u tahay CSB '' cilad qabatin. '
Kani waa foorjo gaaban oo jilicsan carruurta Maandooriye. Tani waa a animation dheer kuwaas oo runtii sharaxaad ka bixinaya asaasiga.
Qaar badan oo ka mid ah cudurradani waxay ku salaysan yihiin 'nasiib' oo ah 'sifo' oo ka mid ah abaalmarinta dabiiciga ah ama xoojiyeyaasha dabiiciga ah ee cuntada, dhajinta, iyo jinsiga. Cunto khafiif ah oo leh heerar sarreeya oo cusbo, sonkor iyo dufan ayaa ah 'cunto aan caadi ahayn' ee qadarka sare ee kalooriga oo ay siiyaan maskaxda si loo yareeyo yaraanta; warbaahinta bulshada waxay u egtahay wixi ka sii daraysa isku dhejinta, boqolaal 'saaxiibo' markaad gujiso; iyo porno internetka oo leh dabaqadeeda oo aan diyaar u ahayn 'caruur kulul' ah waa nooc ka mid ah jinsiga.
Isticmaalka daroogooyinka, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin qiyaas ka sareeya si ay u helaan isla 'hit'. Iyadoo internetka, dadka isticmaala waqtiyada ka dambeeya waxay ubaahan yahiin kuwa cusub ama aad u xoog badan si ay u dareemaan saameyn isku mid ah. Wershadaha porno ayaa kaliya oo aad u faraxsan in la bixiyo tan.
Maadaama heerka dopamine uu hoos udhacay "abaalmarin", si dhakhso ah ayuu u dhacaa mar kale ka dib abaalmarinta la helay. Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay sii wadaan inay riixaan waxyaabo cusub si ay u sii wadaan abaalmarinta. Haddii aynu maskaxdeenna ku khasbanno inaanu soo saarno badeecad joogto ah, waxay ku adkeyneysaa nidaamka iyo soo saarida wax soo saarka sidii tallaabo ilaalin ah. Haddii aan sii wadi karno siibidda, hadana maskaxda ayaa go'aamisa in tani ay noqoto mid deg deg ah ujeeddooyin badbaado ah oo ka soo horjeeda gawaarida ('ku filan'). Marka la eego, heerarka sare ee dopamin wuxuu sii deynayaa sii-deyn la yiraahdo Delta Fos B. Tani waxay ku dhisan tahay nidaamkeenna abaal-marinta ee maskaxda si ay nooga caawiso inaan diirada saarno, xusuusno oo ku celino abaalmarintan muhiimka ah.
Afar dabeecadood ayaa lala xiriiriyaa isbeddel jirka ee maskaxda oo ka dhalanaysa habka mukhaadaraadka. Kuwani waa:
• Dareen la'aanta
• Nidaamka xakamaynta kicinta - Hypofrontality
• Xaaladaha murugsan oo aan fiicnayn
'Maqnaanshaha' waa jawaabo kabid ah oo lagu farxo, gaar ahaan abaalmarinta dabiiciga ah, sida cuntada ama la xirriirida dadka kale. Inta badan waa mida ugu horeysa ee maanka la qabatimay ee maskaxda ee isbedelka isticmaalayaasha. Waxay dareemaan niyadjab, caajis, dabaq iyo fariisasho la'aan. Calaamadaha dopamine ee la yareeyey iyo isbeddelada kale waxay ka tagaan isticmaalaha culus oo xasaasiyad leh maalin kasta raaxo iyo 'gaajo' loogu talagalay dhaqdhaqaaqa dopamine-ka iyo walxaha. Waxay u baahan yihiin kicin ballaaran oo aad u weyn si ay u helaan sheeko. Waxaa laga yaabaa in ay waqti badan ku qaataan internetka, sii wadaan kulanno iyagoo isku dayaya, daawashada marka aan la niyadjabin, ama raadineynin fiidiyowga ugu fiican si loo dhammeeyo. Hase-yeeshee, sansis-ka waxaa laga yaabaa in uu qaabka kor u kaco jilayaasha cusub, mararka qaar ka sii adag, qariib ah, xitaa dhibta. Xasuuso: naxdinta, yaabka iyo welwelka soo saaro adrenaline jack up dopamine oo kordhiya masruufka galmada.
Taa bedelkeeda, waxa kaliya ee dareenkeenna hela oo kor u qaada niyaddeenna ayaa ah waxa aan rabno, dabeecadda balwadda ama walaxda xulashada. Sababtuna waxay tahay waxaan aad ugu baraarugnay arrintaas. Dareen-kicintu waxay kicisaa damac xoog leh ama xusuus-weyn oo miyir-qabka ah ee raaxada, 'xusuusta' euphoric ', markii la hawlgeliyo. Xidhiidhka cue-Memory waa maskaxda 'wada xarig, wada holcaya' hawlgalka. Xusuusta Pavlovian-kan shardiga leh ayaa ka dhigaysa qabatinka mid ka qasbi kara waxqabad kasta oo kale oo ka mid ah nolosha balwadaha.
Xidhiidhada dareen-celinta ee runtii waxay keenaan nidaamka abaal-marinta si ay uga jawaabaan calaamadaha la xiriira ciyaalka ama fikradaha. Cocaine addicts ayaa laga yaabaa inay arkaan sonkorta iyo ka fikirista kookeynta. Alkoolaji wuxuu maqlaa quraaradaha muraayadaha ama urta beerta marka uu baasbeelo oo isla markiiba doonayo inuu galo.
Wixii fara-galinta ladagaalanka internetka, amarrada sida kombiyuutarka, rogista, ama guriga oo kali ah, waxay kicisaa jahwareer aad u daran oo loogu talagalay porno. Miyuu qofku si lama filaan ah oo xor ah (libido run ah) marka xaaskiisa, hooyo ama qolada maareyntu gasho dukaanka? Lama yaabin. Laakiin waxaa laga yaabaa in uu dareemo sida inuu ku jiro autopilot, ama qof kale ayaa xukuma maskaxda. Qaarkood waxay ku tilmaamaan jawaabta jilicsan ee 'jilciga' sida 'gelitaanka tunnel oo leh hal badbaado: porn'. Waxaa laga yaabaa in uu dareemo kacsanaan, garaacid degdeg ah, xitaa gariir, iyo waxkasta oo uu ka fekerayo inuu galo bogga uu jecel yahay. Kuwani waa tusaalooyin ah dariiqooyinka mukhaadaraadka ee xasaasiga ah ee u dhaqdhaqaaqa nidaamka abaal-marinta, qeylinta, "hadda sameeya!" Xitaa halista galmada dembiga galmada ma joojin doonto.
Hypofrontality, ama dhaqdhaqaaqa maskaxda ee gobollada horay loo yareeyey, waxay daciifinaysaa gardarrada ama is-xakamaynta, marka la eego jahwareer culus. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah hoos u dhac ku yimid arrinta caynka ah iyo arrin cad, oo ah gobollada hore. Tani waa qeyb ka mid ah maskaxda naga caawisa in aan naga saarno aaladaha kala doorasho aan fiicnayn mudnaanta muddada dheer. Waxay naga caawineysaa inaan dhahno 'maya' nafteena markaan dareemo jarribaan. Iyada oo aaggan la soo koobay, waxaanu leenahay awood aan wiiqantay si aan wax uga qabanno cawaaqib xumada. Waxay u muuqan kartaa sida dagaal-dagaal. Waddooyinka xasaasiga ah ayaa qeylinaya 'Haa!' halka maskaxda sarreysa ay tiraahdo 'Maya! Mar labaad ma ahan! ' Iyada oo qaybaha kantaroolka ee maskaxda ku jira xaalad daciif ah, marinka daroogadu wuxuu badiyaa ku guuleystaa.
Dhalinyarada qaangaarka ah ayaa labadaba u nugul qabatinka. Ma aha oo kaliya in ay leeyihiin dopamine dheeraad ah oo ku riixaya in ay qaataan halis (bareebaha gawaarida si buuxda ayaa loo niyadjabaa), laakiin lakabadaha hore ee aan si buuxda u hirgelin, (bareegtu si fiican uma shaqaynayaan).
Xaaladaha murugsanaan la'aanta. Tani waxay xitaa khataraha yar yar u horseedaa jahawareerka iyo dib u soo noqoshada sababtoo ah waxay firfircoon yihiin wadooyinka xooggan ee dareenka leh.
Dhacdooyinkani waxay ku jiraan qaybaha dhammaan waxyaabaha la xayiray. Mid ka mid ah dib u soo kabashada ladagaalanka ayaa soo koobay:Marnaba kama dhergi doono waxa aan ku qancin, weligayna weligay kuma qancin doono'.
Ka bixitaanka. Dad badan ayaa aaminsan in qabatinku had iyo jeer u baahan yahay dulqaad (oo loo baahan yahay kicin badan si loo helo saameyn isku mid ah, oo ay keento miyir beelid) iyo calaamadaha ka bixitaanka naxariis darrada ah Xaqiiqdii, midkoodna shuruud uma aha qabatinka - in kasta oo dadka isticmaala sigaarka maanta ay badiyaa soo sheegaan labadaba. Maxay wadaagaan dhammaan tijaabooyinka qiimeynta mukhaadaraadka, 'inkastoo ay jiraan waxyaabo aan wanaagsaneyn'. Tani waa caddaynta ugu kalsoon ee lagu xakameyn karo.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cilmi-baarista ku-adkaysiga iyo kicinta, guji halkan (goobta dibedda, waxay u furantahay daaqad cusub).
Balwad Soo kabashada >>